UGU DAMBAYN: Da'yarka Real Madrid Ee Valverde Oo Ka Hadlay Qaladkii Uu Ku Galay Morata & Haddii Ay Man City Kasoo Bixi Karaan Champions League - Gool24.Net
UGU DAMBAYN: Da’yarka Real Madrid Ee Valverde Oo Ka Hadlay Qaladkii Uu Ku Galay Morata & Haddii Ay Man City Kasoo Bixi Karaan Champions League
Da’yarka ree Uruguay iyo kooxda Real Madrid ee Fede Valverde ayaa ka hadlay qaladkii uu Final-kii Supercopa de Spana ku galay Alvaro Morata iyo waliba haddii ay kooxdiisu guul soo laabasho ah ka gaadhi karto Man City tartanka Champions League.
Valverde ayaa xilli ciyaareedkan 2019-20 qaab cajiib ah oo dar dar leh kusoo galay kooxda koowaad ee Real isaga oo tartamada oo dhan 32 kulan usoo saftay kahor intii aan kubadda cagta la hakin isagoo door weyn kusoo yeeshay shaxda Zidane.
Dhacdada ugu caansan ee marka ay taageerayaasha Real maqlaan magaca Valverde ay xasuusanayaan ayaa ah inuu qalad la odhan karo wuxuu kooxdiisa ku hoggaamiyay ku galay Alvaro Morata ciyaartii ay rigoorayaasha kaga qaadeen Atletico Madrid Final-kii Super Cup-ka Spain.
Fede Valverde oo hada waraysi siiyay wargeyska ABC ayaa sheegay inuusan ogayn haddii uu dhacdadaas ku galayo quluubta taageerayaasha kooxdiisa balse uusan ku faraxsanayn inuu isagu ciyaaryahan qalad ku sameeyo.
“Anigu ma garanayo haddii ay tani u dhigayso gudaha qalbiga taageerayaasha Real Madrid, laakiin anigu uma hanweyni inaan qalad ku galo ciyaartoy naga soo horjeeda” ayuu Valverde hadalkiisa ku furtay.
“Waxa uu ahaa qalad nadiif ah, umaan samayn sidaas si aan isaga u dhaawaco dabcan, anigu ma garanayo qof jecel inuu ciyaartoydda qalad ku galo”
Dhinaca kale Valverde ayaa sheegay in waxkasta ay Los Blancos dhexdeeda suurogal ka yihiin isla markaana ay jirto fursad ay guul soo laabasho ah kaga gaadhi karaan Champion League kooxda Man City oo lugtii hore 2-1 ku garaacday.
“Waa suurogal inaanu soo laabasho samayno (Kulanka Man City) sababtoo ah waxkasta suurogal ayay ka yihiin Real Madrid”